Maxay ka dhiganyihiin haddiyadaha Sucuudiga siiyo Trump ? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxay ka dhiganyihiin haddiyadaha Sucuudiga siiyo Trump ?
Maxay ka dhiganyihiin haddiyadaha Sucuudiga siiyo Trump ?
Markii ra’isulwasaarihii hore ee Britain Winston Churchil uu booqasho ugu tagay boqorkii Sucuudiga Boqor Cabdicasiis Ibnu Sucuud sanadkii 1954-tii waxa uu ogaaday in haddiyaddii uu waday ee ahayd barfuumka qiimihiisu joogay $134 doolar aysan u dhigmin haddiyadii uu ka heley boqor Cabdicasiis oo ka koobnayd cumaamad xariir ah, waran iyo toorri dahab ka samaynaa iyo waliba kaatun (faraanti) dheemanka.
Islamarkii uu Britain kusoo laabtay, Ra’isulwasaare Churchil waxa uu amray in boqorka loo diro gaari ah nooca Rolls-Royce oo haddiyad ah. Xilligaas waxa uu ahaa markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana jiray culeys badan oo dhaqaale.
Xilligan hadda la joogo, madaxda adduunka isuma diraan haddiyado diyaarad ama baabuur ah, balse qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibada Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay illaa 83 sheey oo haddiyad ahaan uu u heley madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kadib booqashadii uu ku tagay dalka Sucuudiga, waxayna tan muujinaysaa dhaqanka israafka ah ee Sucuudiga uu haddiyadaha ku siiyo madaxda Maraykanka.
Muxuu heley Trump ?
Safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda Trump waxa uu kaga qaybgalay shirkii islaamka ee ka dhacay magaalada Riyaad ee Sucuudiga, halkaas oo boqor Salmaan uu Trump ku tubay haddiyado ka kooban warmo, tooreey, booshka rasaasta oo harag ka samaysan, dhar xariir ah oo kuulo lagu dahaaray, cumaamado , dhar tarash iyo aliindi ah, kabbo , catarro ugdoon, iyo waliba farshaxan gacanta lagu qoray.
Liiska haddiyadahan oo uu soo daabacay wargayska Daily Beast, isaga oo isticmaalaya xuquuqda warhelista ayaa waxa ay muujinayaan dhaqanka haddiyadaha ee Sucuudiga.
Balse haddiyadahan ma ahan kuwa qaali ah sida uu qabo Cali Shibaxi oo ah agaasimaha Arabia Foundation.
“Barigii hore dowladaha gacanka waxa ay bixin jireen haddiyado aad qaali u ah sida saacado, dahab iyo wixii la mid ah” ayuu yiri.
Dhawaanahan haddiyadaha waxa ay u badanyihiin kuwa ka turjumaya dhaqanka Carabta, sida farshaxanka oo kale.
Ellen Wald oo buug ka qoreysa Sucuudiga ayaa sheegtay in tirada haddiyadaha ay ka turjumayaan tirada waftiga uu la’egyahay.
Sanadkii 2008-dii waftigii madaxweynaha Maraykanka la socday ee Sucuudiga tagay waxa uu qof kasta heley haddiyad gaar ah.
Ma iska haysan karaa ?
Sida uu qabo sharciga Maraykanka, Trump ma isticmaali karo gashiga haragga shabeelka ah iyo farshaxanada Sucuudiga soo siiyeen iyo dhammaan haddiyadaha kale.
Sharciga Maraykanka ayaa gabi ahaanba mamnuucaya in madaxda iyo saraakiisha dowladda ay qaataan haddiyad qiimaheedu ka badanyahay $390 doolar.
Waxaa la ogolyahay in la dhigo madxafka madaxweynayaasha, ama qofka lasoo siiyay dib ayuu u iibsan karaa hadba qiimaha uu suuqa ka joogo sheeyga.
Hillary Clinton ayaa iibsatay haddiyad kuul ahayd oo ay soo siisay haweenayda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi oo markaas ahayd hoggaamiyaha mucaaradka Myamar, waxayna ahaydn sanadkii 2012-kii.
Ma wax iska caadi ahbaa ?
Booqashooyinka madaxda waddamada waxaa caadi u ah in ay is dhaafsadaan haddiyado maangal ah iyo kuwa aanan maangal ahayn.
Gerald Fejerstein oo ah agaasimaha arrimaha gacanka ee machadka arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegay in mar uu Baxrayn ku tagay safar sanadkii 1990-kii uu haddiyad ahaan u heley saacadda qaaliga ah ee Rolex.
Xiligaas waxa uu ahaa u qeybsanaha arrimaha bariga dhexe ee wasaaradda arrimaha dibada Maraykanka.
Waxa uu sheegay in qof kasta oo ka mid ahaa waftigii wasiirka arrimaha dibada uu heley saacad. Markii uu damcay in uu saacadda ku wareejiyo qeybta hab-maamuuska wasaaradda oo u xilsaaran in ay meeleyso haddiyadaha, ayaa waxaa loo sheegay in uu jiro qol dhan oo ay ka buuxaan saacado haddiyado ah oo laga heley Baxreyn.
Waxaa jirtay mar wasaaradda arrimaha dibada Maraykanka ay dowladaha adduunka kula talisay in aysan haddiyad faras ah siinin madaxweyne Ronald Reagan oo ahaa fardo-dhaari.
Sanadkii 2015-kii madaxweyne Barack Obama ayaa guddoomay haddiyado kala duwan oo uu ka midyahay sawir farshaxan ah oo ay ka muuqdaan rag ciyaaraha kubbada shabaqa, wuxuuna ka heley hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo shimbir dahab ka samaysan oo qiimaheedu yahay $110,000 oo kaga timid Amiirka Qatar Sheekh Tamiim Bin Xamad Al Tani, iyo waliba faras dabah iyo naxaas ka samaysan oo uu ka heley boqorka Sucuudiga Salman.
Maxay ka dhiganyihiin haddiyadaha Trump la siiyay?
Inkasta oo Trump uu Hillary Clinton ku dhaleeceeyey in ay haddiyado iyo waxyaabo kale ka guddoontay Sucuudiga, ayaa haddane haddiyadaha uu ka heley Sucuudiga ayaa waxa la sheegay in aysan ka turjumaynin xiriirka uu la leeyahay dalkaas .
Waxaa la sheegay in haddiyadaha ay astaan u yihiin xiriirka waddamada iyo dhaqanka dalalkaas, balse aysan ka turjumaynin xiriir dublamaasiyadeed oo fiican.
Ellen Wald waxa ay ku doodday in haddiyadaha ay ka midyihiin dhaqamada niyad wanaagga ee waddamada bixinaya, gaar ahaan Sucuudiga oo taariikh ahaan uu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo Maraykanka.
Xigasho:- BBC Soomaali